Ikhaya » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » I-UNWTO kunye ne-Unidigital inkxaso yokuyila kunye noshishino eMelika
I-UNWTO kunye ne-Unidigital inkxaso yokuyila kunye noshishino eMelika
Disemba 14, 2018
Umbutho wezoKhenketho weHlabathi (i-UNWTO) ubonelele ngenkxaso ekusungulweni e-Argentina kweziko lokuqala lezokhenketho eMelika- Unidigital.
I-Unidigital sisiphumo sentsebenziswano phakathi kwamacandelo karhulumente nawabucala ukukhuthaza ukuvela kwezinto ezintsha kukhenketho. Izakubonelela ngeenkonzo, iimveliso kunye noqeqesho kutshintsho lwedijithali ukuze ivumele abona barhwebi baphazamisayo kwezokhenketho eMelika ukuba baphuhlise iiprojekthi zabo. Eli ziko laboniswa njengenxalenye yeQonga le-UNWTO yeTekhnoloji yezoKhenketho, ebibanjwe ngomhla we-11-13 kuDisemba ngo-2018 eBuenos Aires, eArgentina.
"Namhlanje lusuku lwembali kuba sihlanganise amagunya amaninzi ezokhenketho aseMelika ukuzokuvula le ndawo, evulelekileyo kuye nawuphi na usomashishini, nalapho sidibene siza kwenza izinto ezinomdla kakhulu kwaye sifezekise iziphumo ezigqwesileyo, utshilo uNobhala-Jikelele we-UNWTO uZurab Pololikashvili. Uye wongeza wathi: "Sizimisele ukubanceda ukuba bafumane abatyali mali kwaye sibanike nethuba lokubeka kwilizwe lonke kungekuphela eMelika, kodwa nakwilizwekazi."
UMphathiswa wezoKhenketho e-Argentina kunye noSihlalo we-UNWTO Executive Council, u-Gustavo Santos, ugxininise ukuba "izinto ezintsha nezokhenketho zizinto ezihambisanayo ekuveliseni amathuba obomi kubantu bethu nasekudaleni ingqesho". Uye wongeza wathi: "Oku kuyakuqinisekisa ukuzibophelela kwethu noxanduva lwethu kweli candelo, nelizakukhokelela kuphuhliso lwabantu kwiminyaka ezayo."
Umsunguli kunye nomphathi omkhulu we-Unidigital uFelipe Durán wabulela abasemagunyeni ngobukho babo wathi: “Ndinovuyo ngeBuenos Aires ukuba ibe yindlela yokungena eMelika, indawo apho ubugcisa, ubuchwepheshe kunye nokhenketho zihlangana khona; ngeeprojekthi zethu siza kuthatha inxaxheba kukhenketho lwabantu. ”
I-Unidigital Hub ivulwe kwimeko ye-UNWTO yezoKhenketho yeTekhnoloji yoKhenketho, iqonga lezokhenketho kunye netekhnoloji eliququzelelwe yi-UNWTO kunye noMphathiswa Wezokhenketho eArgentina. Ophumelele i-UNWTO Data Challenge 2018 naye wabhengezwa kumsitho, u-Diego Turconi. Le projekthi iququzelelwe ngokubambisana ne-IE ye-IE yeYunivesithi, enenjongo yokubonisa amandla okwenza izisombululo eziqhutywa yidatha.
Ukhuphiswano loQeqesho lwengingqi lwaphumelela ngu-Eduardo Zenteno del Toro, ngeprojekthi yakhe yeNenemi, iqonga elifuna ukuzisa abahambi baseAsia eMexico abanokubanakho ukwanda eMelika. Ngoku uya kuba nethuba lokufumana iinkonzo ze-Unidigital ezixabisa ukuya kuthi ga kwi-100,000 yeedola.
Ukuthatha inxaxheba kwi-UNWTO yezoKhenketho yeTekhnoloji yoKhenketho ziinkokheli kwinto entsha, kwinqanaba lokuqala kunye nabadlali abaphambili kulwakhiwo lwehlabathi nakwinkqubo yenguqu yedijithali.
Liqonga elingazange libonwe ngaphambili kwezorhwebo kunye nokuyila kwezokhenketho, ngenjongo yokudala ubudlelwane phakathi kwabadlali abahlukeneyo, bebelana ngamabali empumelelo kunye nokukhuthaza inkcubeko yotyalo mali. Ngokunjalo, esi sithuba sibonelela ngezisombululo kwimiceli mngeni enxulumene notshintsho lwedijithali njengomthombo wokudala ingqesho, ukhuphiswano kunye nophuhliso oluzinzileyo.
Kule meko inye, isemina eyayijolise kubaphathiswa baseMelika kunye nabaphathiswa besizwe baseArgentina yabanjwa malunga nendlela yokwakha iindlela zobuchule zedijithali. Iworkshop yokuqalisa ibibanjiwe, kujongwana nomxholo wenkuthazo kubatyali zimali bezokhenketho kunye noshishino.